Project Opensky 777 obheke ukubambelela inkinga swich.
Umbuzo Project Opensky 777 obheke ukubambelela inkinga swich.
unyaka 1 8 edlule #662 by ricsmi
Ilandiwe futhi yashayela i-Project Opensky Boeing 777 namuhla futhi indiza yayo enhle, inkinga kuphela enginayo yukuthi i-swing hold hold swich ayibonakali ukusebenza.
Setha umshayeli wezimoto ngokujwayelekile njengokujwayelekile futhi ubeke isihloko esikufunayo bese ucindezela i-swich yokubamba njengoba ungayenza kwezinye izindiza, kodwa nje ukuvala inkambo yamanje, ngizame zonke izinhlobo kodwa njalo yenza into efanayo .
Noma yimiphi imibono yamadoda, ingabe iyinkinga noma ingabe ngisenza kabi?
unyaka 1 8 edlule #664 by ricsmi
Kulungile ngiye ngikuqaphela, ngiyaqhubeka ngidinga ukusebenzisa inkinobho ye-Nav Select, hhayi i-nav ibambe, into kuphela inkinobho yokukhetha i-Nave isebenza ku-cockpit ye-2d engingahlali ngiyisebenzise.
Ngakho ngizobukeza umbuzo wami, noma ubani uyazi ukuthi kungenzeka yini ukushintshanisa inkinobho ye-nav kwi-cockpit ye-3d kuya kunkinobho ye-nav khetha esikhundleni?